चिडियाखानामा राखिएको एक पेंगुइनले एक केटीलाई यतिधेरै माया गर्‍यो की प्रेमको पर्खाइमा तडि्पँदा तडि्पँदै उसको प्राणपखेरु नै उड्यो । यो घटना जापानको हो । जापानको टोबू चिडियाखानामा बस्ने एक भाले पेंगुइनले आफ्नो मायालुलाई भेट्टाउनै नपार्इ दुनियालाई छाडेको छ । पेंगुइनको नाम ग्रेपकुन हो । ग्रेपकुनले चिडियाखानाकै एक केटीलाई प्रेम गर्थ्यो । चिडियाखाना प्रशासनका अनुसार केही … Read more
सेप्टेम्बरदेखि विश्वले सोच्न पनि नसक्ने काम गरेर यसरी दुनियाँ चकित बनाउँदै चीन
चीन आफ्नै प्रविधिमा निर्माण भएको विश्वकै तीव्र गतीको रेल पुनः पटरीमा दौडाउने तयारीमा जुटेको छ । आगामी महिना अर्थात सेप्टेम्बरदेखि बेइजिङ र सांघाईबीच यो रेल दौडेको देख्न पाइने भएको छ । नयाँ पिढीको यो बुलेट ट्रेन ‘फुसिङ’ २१ सेप्टेम्बरदेखि दौडन सुरु गर्ने छ । यो रेलको अधिकतम गती प्रति घन्टा ४ सय किलोमिटरको हुनेछ । … Read more
चार अर्ब रुपैयाँमा बिक्यो यो कचौरा
एउटा कचौराको मूल्य कति होला ? हंङकङमा हालै एउटा कचौरा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँमा लिलाम भएको छ । चिनियाँ माटोबाट बनेको उक्त कचौरा एकहजार वर्ष पुरानो हो । चीनको सांग राजवंशका पालको यो कचौरा मंगलबार हंगकंगमा कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्री भयो । खरिदकर्ताले यसलाई झण्डै ३ अर्ब ८० करोड डलर मूल्य तिरेर किनेका छन् । खरिदकर्ताले … Read more
कसैले प्रयोग गरेर फ्याँकेको कट्टुको मूल्य कति होला ? वास्तवमा यो कुनै सोध्ने प्रश्न नै होइन, किनकि त्यस्तो मूल्यहीन वस्तु रद्दीका लागि मात्र योग्य हुन्छ । तर जर्मनीका चर्चित तानाशाह हिटलरले प्रयोग गरेको कट्टु भने झन्डै ६० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । अमेरिकामा भएको एक लिलामीका क्रममा हिटलरको कट्टु ५५ सय अमेरिकी डलरमा लिलाम … Read more
विश्वप्रसिद्ध पौडीबाज माइकल फेल्प्स १०० मिटरको स्पर्धामा अन्ततः पराजित भएका छन्। तर उनको यो पराजय कुनै मानिसविरुद्ध होइन, सार्क माछासँग हो। फेल्प्सले ३८.१ सेकेण्डमा १०० मिटरको दूरी पार गरे भने सार्कले ३६.१ सेकेण्डमै त्यो दूरी पार गरेको थियो। यद्यपि फेल्प्स र सार्कबीचको यो प्रतिस्पर्धा एकै स्थानमा भएको होइन। वास्तवमा डिस्कोभरी च्यानलले सार्क सप्ताह मनाउन फेल्प्स … Read more
निर्वस्त्र भएर भायलिन बजाउँदै आकाशबाट छलाङ
हवाइजहाजबाट नांगै हाम फाल्नु कुनै जोक होइन, किनकि यो जो कोहीले गर्न सक्ने काम हुँदै होइन । तर, अष्ट्रेलियाका संगीतकार ग्लेन डोनेलीका लागि भने यो जिन्दगीको एउटा इच्छा नै थियो । जसलाई उनले पूरा गरिछाडेका छन् । ग्लेनले आफ्नो ३० औं जन्मदिनका अवसरमा उनले निर्वस्त्र स्काइडाइभ गर्ने निधो गरे र त्यसरी तल खसिरहँदा भायलिनमा कुनै … Read more
चीनकाे एउटा गाउँ, जहाँ हरेक महिलाको कपाल रापुञ्जेलको जस्तै लामो
कपाल लामो भएकी रापुञ्जेलको कथा त हामीले सुनैकै छौं । तर रापुञ्जेलकै जस्तो लामो कपाल भने विरलैको मात्र हुन्छ । तर चीनमा यस्तो गाउँ छ, जहाँ हरेक महिलाको कपाल उही कथाकी पात्र रापुञ्जेलको जस्तै लामो छ । चिनको ग्वाङ्सी ह्वाङलुओ याओ प्रान्तमा महिलाहरुले आफ्नो जीवन कालमा एक पटक मात्र कपाल काट्न पाउँछन् । उनीहरुले किन … Read more
यी ग्रहमा हुन्छ हिराको वर्षा
सौर्य परिवारको एक ग्रह पृथ्वीमा पानीको वर्षातले कहिलेकाहिँ बबण्डर मच्चाउँछ । तर यही मण्डलका दुई ग्रहहरु, अरुण र बरुणमा चाहिँ हिराको वर्षा हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, पछिल्ला केही दिनयता अरुण र बरुण ग्रहमा हिराको अविरल वर्षा भैरहेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, यी दुई ग्रहको भित्रि भागमा वायुमण्डलीय चाप अत्यधिक हुन्छ । जसका कारण हाइड्रोजन र … Read more
विश्वके ठूलो किर्तिमानी समोसा
पूरै १५ घण्टाको समय लगाएर तयार पारिएको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो समोसा । यो समोसा डेढ क्विन्टल अर्थात् १५० किलो वजनको छ । बेलायतको राजधानी लण्डनमा बनाइएको उक्त समोसाले चर्चा बटुलिरहेको छ । नबटुलोस् पनि किन ? यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो समोसा हो । पूर्वी लण्डनको एक मस्जिदमा यो समोसा बनाइएको छ । मुस्लिम समाजको … Read more
विश्वकै सानो सुनको झण्डा
विश्वकै सबैभन्दा सानो आकारको दाबी गरिएको सुनको झण्डाको आकार यति सानो छ की यसलाई तपाइँ सियोको प्वालबाट समेत निकाल्न सक्नुहुन्छ । भारतको राजस्थानस्थित उदयपुरका एक व्यक्तिले सबैभन्दा सानो आकारको भारतीय झण्डा निमाएण गरेका छन् । सुक्ष्म कालिकढ इकबाल सक्काले भारतको ७० औँ स्वतन्त्रता दिवसको वर्षगाँठका अवसर पारेर उक्त सुनको झण्डा तयार पारेका छन् । विश्वकै … Read more